Iindaba - SISENZA IZINTO EZIQHELEKILEYO ZEMINYAKA YAMANDLA.
LI-ASTNFRAMTMamacandelo ukuba iingcango amandla. Ukusuka kwiminyango yangaphandle yokubola, ukuya kuthi ga ezantsi kutshayela, senza izinto zomnyango zangaphandle ezisebenza ngcono, zifakela ngokukhawuleza kwaye zihlala ixesha elide.
LI-ASTNFRAMTMamacango omnyango ayinto edityanisiweyo ye-pvc eveliswa ngaphandle kokubola, ukujija kunye nokwahlukana Zizinto ezomeleleyo kwinkqubo yokungena.
LI-ASTNFRAMTMizinto zomnyango zibonelela ngomgangatho, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kweenkqubo zokungena. Nxibelelana nathi namhlanje malunga nemibuzo ngeminyango ye-WPC, i-T-bar, izitena, kunye ne-T-astragals.